Vaovao - Vahaolana fitrandrahana mandeha ho azy 2019-nCov nataon'i TIANGEN
Tamin'ny volana desambra 2019, nisy andiana trangana pnemonia tsy fantatra antony efa natomboka avy any Wuhan, faritanin'i Hubei, ary tsy ela dia niparitaka tany amin'ny ankamaroan'ny faritany sy tanàna tany Chine, ary firenena maro hafa tamin'ny Janoary 2020. Hatramin'ny 22:00 alina tamin'ny 27 Janoary, tranga 28 voamarina ary 5794 ahiahiana tranga 2019-nCov no notaterina tany Shina. nyNy loharanon'ny otrikaretina ny virus dia voatonona ho Rhinolophus, ary ny isan'ny maty ankehitriny dia 2,9%.
Tamin'ny 12 Janoary 2020, nanambara ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) fa ny valanaretina pnemonia dia vokatry ny karazana coronavirus vaovao (2019-nCov). Coronavirus dia karazana virus izay miparitaka amin'ny biby. Ny karazana asidra nukleostika virus dia RNA tokana. Mandritra izany fotoana izany dia namoaka ny mombamomba ny filaharan'ny asidra nokleô nCov izay nozarain'ny manam-pahaizana sinoa, izay nanome ny fototry ny fizahana molekiola amin'ny fikarohana virus ary nahatonga ny fitiliana haingana sy ny famantarana ireo otrikaretina.
Nanolo-kevitra ny OMS fa ny olona manana aretin'ny taovam-pisefoana toy ny kohaka, tazo, aretin'ny taovam-pisefoana ary tonga tany Wuhan tao anatin'ny 14 andro na niharan'ny fifandraisana tamin'ny marary hafa dia tokony hosedraina amin'ny fomba feno. Tamin'ny 17 Janoary 2020, namoaka ny "Fitsapana laboratoara ho an'ny coronavirus novambra 2019 (2019-nCoV) ny WHO tamin'ny tranga trangana olombelona, ​​Torolàlana vonjimaika, 17 Janoary 2020". Nasongadin'ny torolàlana fa ny santionany azo angonina avy amin'ireo marary simptimika dia misy ny santionany amin'ny taovam-pisefoana (savona nasofarynx sy orofaryngeal, sputum, lavarangana bronchoalveolar, sns.) Ary ny santionan'ny serum, toy izao:
* Ho fitaterana santionany amin'ny detection viral, ampiasao VTM (medium transport viral) misy fanafody antifungal sy antibiotika. Ho an'ny kolontsaina bakteria na holatra dia ento maina na anaty rano be tsy misy fetra. Sorohy ny hatsiaka miverimberina sy ny fanitsakitsahana specimens.
Ankoatry ny fitaovana fanangonana manokana voalaza etsy ambony latabatra, dia manome toky koa fa misy fitaovana sy fitaovana hafa azo alaina: ohatra: fitoeram-pitaterana sy kitapo fanangonana santionany ary fonosana, fonosana sy fonosana mangatsiaka na ranomandry maina, fitaovana fanaovana ra tsy misy fetra (ohatra fanjaitra, syringes ary fantsona), mari-pamantarana sy mari-pamantarana maharitra, PPE, fitaovana ho an'ny fandotoana ny faritra.
Ho an'ny fitiliana viriosy, ny santionan'ny serum dia azo ampiasaina hamantarana virus amin'ny alàlan'ny fomba fanefitra, raha ny RTqPCR kosa dia asaina mamantatra asidra nCov nukôrika hahitana haingana sy marina kokoa. Toy ny virus
fantatra ny filaharana, ny votoatin'ny asidra niôlôjika virosy ao amin'ilay santionany dia azo fantarina haingana fotsiny
mifantina reagents mety sy primera mifanentana
(Famaritana diagnostika ny Wuhan coronavirus 2019 avy amin'ny RTPCR, Protocol ary fanombanana mialoha hatramin'ny 13 Jan 2020) amin'ny maha mpitarika eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana asidra nokleika sy ny fikarohana any Sina, TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD. dia nanome otrikaretina vava-tanana-vava sy valanaretina virus influenza A (H1N1) ho an'ny olona maherin'ny 10 tapitrisa. Tamin'ny taona 2019, ny tsimokaretina tsimokaretina TIANGEN's virus fitrandrahana sy fitaovam-pitadiavana dia nampiharina tamin'ny santionan'ny tazo mahery afrikanina 30 tapitrisa, nahatonga ny anjara birikiny tamin'ny famaritana sy fisorohana ny tazo kisoa kilasika any Sina. Ny TIANGEN dia tsy vitan'ny hoe manome otrikaina haingana sy marina amin'ny fitrandrahana sy ny detection virus, fa koa manome fitaovana manodina fikosoham-bolo mety sy mahomby ary mpitroka asidra nôtika mandeha ho azy, izay ahitana vahaolana feno amin'ny fitrandrahana sy ny fikarohana ny virus.
Vahaolana fitrandrahana asidra niokleary mandeha ho azy
TIANGEN Automated Nucleic Acid Extractors dia sehatra mandeha ho azy ho an'ny fitrandrahana asidra nioklika mampiasa fomba maivana. Ny fampiharana ireo sehatra ireo dia tsy mampihena be fotsiny ny enta-mavesatra amin'ny fizahana sy ny quarantine departemanta, fa mampihena ihany koa ny lesoka amin'ny fitrandrahana ny tanana, ary miantoka ny tsy fitoviana sy ny fahamarinan'ny asidra nukleika nalaina.
TIANGEN Automated Nucleic Acid Extractor dia manana fantsom-bokatra isan-karazany (ao anatin'izany ny fantsona 16, 24, 32, 48, 96), ary ny reagents mifanentana dia azo ampiasaina amin'ny fitrandrahana asidra niokrika avy amina karazana santionany. TIANGEN koa dia manome serivisy fampiroboroboana reagent namboarina sy serivisy fampidirana fitaovana mifanaraka amin'ny fepetra andrana samihafa.
TGrinder H24 Homogenizer an'ny tissue
● Ampiasaina betsaka amin'ny fikolokoloana sy ny homogenizing ny santionany amin'ny tavy sy ny santionany
● Miaraka amin'ny hery fananganana homogenization 2-5 heny noho ny zavamaneno nentim-paharazana
● Fitotoana fitoviana sy fanaovana homogénisialy, hisorohana ny fandotoan'ny hazo fijaliana
● Fitaovana fiarovana mandeha ho azy hiarovana ny fiarovana ny mpiasa ao amin'ny laboratoara
● Famoahana santionany: santionany 1-32
● Volana fanodinana: 20-1000 μl
● Karazana santionany: Rà, sela, sela, otrikaina, virus ary santionany hafa
● Fotoana fanodinana: Mahatratra 8 minitra hahazoana asidra nukleic viral
● Fomba fanaraha-maso: Fomba fanaraha-maso indroa an'ny Windows Pad sy ny bokotra efijery
● Fampivoarana ny lampihazo: Sehatra misokatra, maimaimpoana mifanentana amin'ireo mpamoha reagents
● TGuide S32 Virus Magnetic Viral DNA / RNA Kit (DP604)
● Fampiharana marobe: Ny virus virus / RNA avo lenta dia azo diovina amin'ny serum, ny plasma, ny santionany amin'ny swab, ny vahaolana amin'ny fitsaboana ny sela ary ny vahaolana fitehirizana ireo virus isan-karazany.
● Tsotra sy mahomby: Ity vokatra ity dia mifanaraka tanteraka amin'ny TGuide S32 Automated Nucleic Acid Extractor, izay afaka mamoaka virus ADN / RNA miaraka amin'ny vokatra avo, fahadiovana avo lenta, kalitao azo antoka ary azo antoka.
● Fampiharana any ambany: ny asidra nokraika nodiovina dia mety amin'ny fanandramana ambany ny virus PCR sy ny PCR tena izy.
Vahaolana fitrandrahana asidra niokleary amin'ny tanana
Amin'ny maha-mpitarika eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana asidra nokleika sy ny fikarohana azy, TIANGEN dia manana andiam-bokatra fitrandrahana asidra nioklealy betsaka indrindra ao Shina, izay mety indrindra amin'ny fitiliana coronavirus amin'ny karazana santionany: ra, serum / plasma, sela, swab, virus , sns.
TIANamp Virus ADN / Kit RNA (DP315)
● Fahombiazana avo lenta: Ny virus virosy avo lenta sy ny RNA dia azo alaina amin'ny fanadiovana haingana miaraka amin'ny famerenana avo lenta.
● Fahadiovana avo lenta: fanesorana tanteraka ny loto sy ny «inhibitors» ho an'ny fampiharana ambany.
● Fiarovana avo: tsy ilaina ny fitrandrahana reagent biolojika na ny etanol.
Vahaolana momba ny virus amin'ny RNA
1. Rafitra Pipetting mandeha ho azy TEasy
● Fahamarinana avo lenta: ny sakana mangatsiaka dia afaka mitazona ny hafanan'ny santionany reagent ambanin'ny 7 ℃ mihoatra ny 60 min. Ny APM tsirairay dia ampifanarahana amin'ny fenitra iraisam-pirenena, izay manana marimarina kokoa noho ny pipetting manual.
● Fandidiana mora: kely habe. Mavesatra maivana. Tsy mila fitaovana ho an'ireo mpisolo toerana. Fomba fanomanana PCR / qPCR namboarina. Fandehanan-tànana tsotra momba ny fanomanana vahaolana PCR.
● Fampiharana marobe: Azo ampiasaina amin'ny pipetting lozisialy 96/384, PCR, qPCR, fikarohana ny génera ary fanandramana avo lenta.
FastKing One dingana RT-qPCR Kit (Probe) (FP314)
Ny FastKing One Step RT-qPCR Kit (Probe) (FP314) novolavolain'i TIANGEN dia kitapo fitiliana fluorescence transactive miverimberina miorina amin'ny fomba probe, izay natao manokana ho an'ny fitiliana ireo fototarazo amin'ny santionany isan-karazany. Ny KingRTase ao anaty kit dia transcriptase miova miova amin'ny molekiola vaovao, izay manana fifandraisana akaiky kokoa amin'ny RNA sy ny fitoniana amin'ny hafanana, miaraka amin'ny fahombiazan'ny fandikana an-tsoratra ary ny fahaiza-manaon'ny modely RNA rafitra faharoa. Ny fanombohana vaovao Taq DNA polymerase dia ampiharina ihany koa mba hanomezana ny fihenan'ny PCR fahombiazana sy maha-manokana azy. Ho fanampin'izany, ny kit dia manamora ny singa betsaka indrindra amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny anzao Taq sy MLV ho fangaro amin'ny anzima, ary ny buffer ion alohan'ny fampifangaroana, dNTPs, ny stabilizer PCR ary ny enhancer ao amin'ny MasterMix, ka ny dingana fampifangaroana singa maro dia mety ho
● Fahombiazana avo lenta: ny transcriptase mihodina tsara sy ny polymerase ADN dia miantoka ny fahombiazan'ny fihetsika avo lenta
● Fiverenana tsara: Ny polymerase dia afaka mamaky amin'ny alàlan'ny modely RNA miaraka amin'ny atiny GC ambony sy firafitra faharoa sarotra
● Fampiharana marobe: Azo ampiharina amin'ny modely RNA miaraka amin'ny fahalotoana amin'ny karazany samihafa
● fahatsapana avo: ny modely ambany ambany noho ny 1 ng dia azo fantarina tsara, indrindra ho an'ireo maodely tsy dia be loatra
Ohatra amin'ny detection Virus RNA
Ny asidra nokleinin'ny gropy H5 avian dia nalaina avy tamin'ny TGuide S32 Magnetic Viral DNA / RNA Kit (DP604). Ny FastKing One dingana RT-qPCR Kit (Probe) (FP314) dia nampiasaina ho an'ny fizahana RT-qPCR amin'ny alàlan'ny primera gropy fluide H5 manokana.
ABi7500Fast dia nampiasaina tamin'ny fikarohana RT-qPCR. Ny valin'ny antigen virus H5 avian influenza (10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6and 10-7 fanalefahana) avy amin'ny santionany 200 μl dia mampiseho vokatra azo avy amin'ny fitrandrahana asidra nokleôly avo, izay afaka mamaly ny manaraka filàna fandikana an-tsoratra, PCR, RT-PCR, PCR amin'ny fotoana tena izy, sns. Ny PCR amin'ny fotoana tena izy dia manome valiny amin'ny fahatsapana avo, famerimberenana tsara ary ny fahamendrehana fanalefahana gradien. Ny fifangaroana samihafa amin'ny santionan'ny asidra nioklealy dia azo tsapain-tanana tsara.
Fotoana fandefasana: Apr-11-2021